Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo lagula taliyey inuu kulanka Arsenal keydka dhigo Marcus Rashford – Gool FM
(Manchester) 31 Okt 2020. Macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa lagula taliyey inuu keydka dhigo oo uusan ku soo bilaabin safka hore ee kulammada Premier League iyo Champions League Weeraryahankiisa Marcus Rashford.
Xiddigan reer England ayaa saddexleey saxiixay kulankii ay guusha weyn ka gaartay Man United kooxda RB Leipzig ee Champions League, isagoo kaliya garoonka ku jiray kaliya 27 daqiiqo, waxaana sidoo kale kaga horreeyay kulankii midkii uu PSG ka dhaliyey goolka guusha daqiiqadihii dambe.
Yeelkeede, khabiirka dhanka ciyaaraha ee Paul Merson ayaa aamisan in Tababare Solskjaer ay u wanaagsan tahay inuu bedel ku soo galiyo garoonka Marcus Rashford, halkii uu ku soo bilaabi lahaa, isagoo rumeysan inuu Rashford wax qabad fiican yahay marka uu ka soo kaco kursiga keydka.
Khamiir Merson ayaa xusay in kulanka Manchester United ay Axadda soo dhoweynayso Arsenal ay difaacan Gunners yihiin kuwo tayadoodu yar tahay oo uu dili karo Rashford haddii uu bedel ku yimaad, laakiin caadiyan uu xiddigan reer England yahay mid shaqo badan qabta.
Paul Merson ayaa yiri: “Arsenal waxay noqon doontaa ciyaar adag, haddii 0-0 ay ahaato ilaa daqiiqadda 60-aad oo uu Rashford soo gelo marka ay difaaca Gunners daalaan, waxay noqon kartaa maalintiisii.”
Waxa uu sidoo kale xusay khabiirku in loo baahan yahay in kal ciyaareedka oo dhan uu Rashford ahaado mid bedel ku soo gala garoonka oo aan lagu soo bilaabin safka hore waxaana uu yiri: “Qalad ha ii fahmina, Marcus Rashford wuxuu aad ugu wanaagsan yahay in xilli ciyaareedka oo dhan uu bedel ku yimaado.”